बेथलहेम को तारा: यो के हो, विशेषताहरु, इतिहास र उत्पत्ति | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ईसाई परम्परा अनुसार, बेलेन तारा यो तारा हो कि Magi येशू ख्रीष्ट को जन्मस्थान को लागी मार्गदर्शन गर्दछ। म्याथ्यु को सुसमाचार उल्लेख छ कि Magi बेथलहेम को तारा पश्चिम मा देखा परेको छ, यद्यपि यो भनिएको छैन कि यो एक ग्रह, एक तारा, वा अन्य खगोलीय घटना थियो। लेखको अनुसार, बुद्धिमान मानिस तारा संग यात्रा र येशूको जन्म भएको ठाउँमा रोकियो। डाक्टरले उनलाई यहूदी राजा संग सम्पर्क मा राखे। यदि उनीहरु ग्रीक वा रोमन खगोलविद् थिए, उनीहरु ध्रुव तारा, राजा ग्रह, र रेगुलस, राजा तारा संग को तारा जोडिएको हुन सक्छ। यदि उनीहरु बेबिलोन बाट हुन्, उनीहरु यसलाई शनि (Kaiwanu) संग जोड्न सक्छन्। जे होस्, यो सम्भव छ कि सिरियस ओरियन बेल्ट को "तीन राजाहरु" द्वारा नामित छ।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई बताउन जाँदैछौं कि बेथलेहेम को स्टार को विशेषताहरु र यसको इतिहास को केहि।
1 बेथलेहेम को तारा को रहस्य
2 बेथलेहेम को तारा को इतिहास
3 बुद्धिमान मानिसहरु
4 तारा के हुन सक्छ?
बेथलेहेम को तारा को रहस्य
बेथलेहेम को तारा ख्रीष्ट को जन्म संग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो रहस्य मध्ये एक हो। यो सेन्ट मैथ्यू, एक अलौकिक तथ्य वा एक खगोलीय दर्शन को एक आविष्कार हो? यसलाई बुझाउन को लागी, तपाइँ जान्न को लागी जब येशू जन्मनुभएको थियो र पूर्व बाट बुद्धिमानी मानिसहरु को हुन्।
येशू को बचपन को बारे मा, हामी मात्र सेन्ट मैथ्यू र सेन्ट ल्यूक को सुसमाचार बाट जान्दछौं, र यहाँ सम्म कि दुई फरक छन्। यस अर्थमा, सैन Mateo एक व्यापक दायरा छ। वास्तव मा, तथ्य यो हो कि तपाइँ पनी थाहा छैन कि बेथलहेम को तारा स्पष्ट रूप मा ख्रीष्ट को जन्म को मिति संग सम्बन्धित छ, तर यो एक ठूलो अनसुलझिएको प्रश्न हो: जब येशूको जन्म भएको थियो? सही हुन, यो 2021 वर्ष पहिले जन्मिएको थिएन। हाम्रो मिति गलत छ र येशू को जन्म संग मेल खाँदैन। हो, सबैभन्दा नराम्रो कुरा यो हो कि कुनै विद्वान एक विशिष्ट मिति दिन को लागी हिम्मत गर्दैन र वर्तमान मा केहि गर्न सकिदैन।
बेथलेहेम को तारा को इतिहास
जब सम्राट सीजर अगस्टसले जनगणनाको आदेश दिए, सुसमाचारहरुमा येशू को जन्म को वर्णन छ, जो 8 र6ईसा पूर्व को बीचमा भयो। C. «सबै मूल को शहर मा दर्ता गरिनेछ। डेभिड परिवारका जोसेफ गालीलको शहर नासरत छोडेर बेथलेहेम, यहूदिया, दाऊदको शहर, आफ्नी गर्भवती पत्नी मरियमसँग दर्ता गर्न गए। यो पनि मिल्छ राजा हेरोद को अन्तिम बर्ष, जो ४ ईसा पूर्व मा मरे। C। चन्द्र ग्रहण को दिन। दुई आंशिक चन्द्रग्रहण मार्च १३ र सेप्टेम्बर ५ मा रेकर्ड गरिएको थियो
हेरोदले डाक्टरलाई भने: “बेथलेहेम जानुहोस् र बच्चाको अवस्था ध्यान दिएर थाहा पाउनुहोस्; जब तपाइँ उसलाई भेट्टाउनुहुन्छ, मलाई थाहा दिनुहोस्, म पनि उहाँको पूजा गर्न जान चाहन्छु। तर बुद्धिमान मानिसहरु हेरोदको मनसाय जान्दै फर्केनन्, र उनीहरु अर्को बाटो बाट फर्के। “बुद्धिमान् मानिसहरूले हेरोदलाई ठट्टा गरे र उनी धेरै रिसाए। उनले जनतालाई चार राज्यमा दुई बर्ष भन्दा कम उमेरका सबै बच्चाहरुलाई मार्न आदेश दिए। "
त्यतिबेला, येशू २ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हेरोदको मृत्युको मिति र उसको मृत्यु भन्दा केही बर्ष अगाडी दुई बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुलाई मारेको मिति थाहा पाएर, येशूको जन्म मिति7वा6ईसा पूर्व हो २०० 2008 मा, यरूशलेमको हिब्रू विश्वविद्यालयका पुरातत्वविद्हरुको टोलीले १ औं शताब्दी ई ० देखि २-२ वर्ष उमेरका बालबालिकाका सयौं शवहरु उत्खनन प्रक्रियाको क्रममा भेट्टाए, जुन हेरोदको नरसंहारसंग मेल खायो।
जे होस् बेथलहेम को तारा थियो, यो एक गौरवशाली घटना हो कि Magi को चासो piqued भएको हुनुपर्छ, तर यो अन्य नागरिकहरु को लागी मामला होइन। सेन्ट मैथ्यू मात्र एक थिए जो Magi उल्लेख, र उहाँले उसलाई राजा को उपाधि, न त उसको विशिष्ट नाम, न त उसको नम्बर दिनुभयो। राजाको उपाधि तेस्रो शताब्दीमा उनीहरुलाई दिइएको थियो। चौथो शताब्दीमा, धर्मशास्त्री ओरिजेन र टर्टुलियनले तीन बुद्धिमानी मानिसहरुको कुरा गरे, र आठौं शताब्दीमा मेलचियर, ग्यास्पार र बाल्टासार नामाकरण गरियो। जादूगर बुद्धिमान मानिसहरु र वैज्ञानिकहरु जो आकाश र सम्भव भविष्य आकाशीय घटनाहरु जान्दछन्।
तिनीहरूले प्रतीक प्रणाली को व्याख्या गरे जुन एक ग्रह को अर्को ग्रह को दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व गर्दछ वा प्रवेश र ताराहरु को नक्षत्र छोडेर। उनीहरु ज्योतिषी पनि हुन्। Magi तीन ज्ञात महाद्वीपहरु को समय मा प्रतिनिधि थिए; एशिया, अफ्रिका र युरोप। उनीहरु सम्पूर्ण ज्ञात संसारका प्रतिनिधि हुन्।
तारा के हुन सक्छ?
एक ग्रह संयोजन7ईसा पूर्व मा भयो। C., जुन सामान्य छैन। बृहस्पति ग्रह शनि को लगभग छोटो समय मा लगभग ३ पटक सम्म बित्यो। यो मीन नक्षत्र मा भयो। जादूगर यस तथ्य को रूप मा व्याख्या: न्याय को एक महान राजा (बृहस्पति) (शनि) यहूदीहरु (मीन) को बीच मा जन्म भएको थियो। माछा को प्रतीक ईसाई धर्म को प्राचीन प्रतीक संग सम्बन्धित छ, र विषय को केहि विद्वानहरु बताउँछन् कि यो नक्षत्र मा बृहस्पति र शनि को स्थिति बाट व्युत्पन्न छ, र यहाँ सम्म कि मछुवा को जन्म संग सम्बन्धित छ, येशू को ।
अगमवक्ताका अनुसार, मसीहको आगमनको अपेक्षा गरिएको थियो, र यी संकेतहरूले संकेत गर्दछ कि यो भइरहेको छ, कम से कम पूर्वी बाट मागी को लागी। बृहस्पति मुख्य देवता हुन् र शनि उनका पिता हुन्। कुन प्रमुख घटना मसीह को जन्म को आवश्यकता हुन सक्छ? र त्यहाँ मात्र ग्रहहरु को एक संयोजन तर तीन पटक थियो। राजाहरु, देवताहरु र मछुवाहरु, एक महान व्यक्तित्व को उपस्थिति संग मिल्दो एक सिम्बोलोजी, कम से कम जो मसीह को लागी पर्खिरहेका थिए।
यो एक शक्तिशाली सुपरनोभा हुन सक्छ, एक तारा सूर्य को तुलना मा दस गुणा ठूलो छ कि विस्फोट भयो, तर यसको कुनै रेकर्ड छैन र यो आकाश मा छोडिएको छैन। केहि अद्भुत 31 मार्च ईसा पूर्व को मार्च5मा भयो। ग। एउटा नयाँ ताराले आकाशलाई उज्यालो दिन्छ। Novae ताराहरु छन् कि धेरै उज्यालो प्राप्त, सुपरनोवा को रूप मा उज्यालो छैन, तर तिनीहरू प्रभावशाली छन्। नयाँ तारा days० दिन को लागी चम्क्यो र जादूगरहरु यो पूर्व पछि लागे। जब उनीहरु यरूशलेम पुगिन् र हेरोदले उनीहरुलाई देखे, तारा दक्षिणमा चम्किरहेको थियो, भोलि बिहान बेतलेहेम माथि।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी संग तपाइँ बेथलहेम को स्टार र यसको इतिहास को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » बेलेन स्टार
सान एन्ड्रेस गल्ती